20193 बटन अडियो कार कुञ्जी फोब आवरण
सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरण
अनुकूल सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरण
सिलिकॉन स्टीयरिंग व्हील आवरण
VW सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
अडी सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
मर्सिडीज बेंज सिलिकॉन कुञ्जी कवर
बीएमडब्ल्यू सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
फोर्ड सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
किरिया सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
निसान सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
शेभ्रोलेट सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
हुन्डई सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
Peugeot सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
रेनाल्ट सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
ओपल सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
Buick सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
टोयोटा सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
अल्फा रोमियो सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
होंडा सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
Fiat सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
जीप सिलिकन कुञ्जी आवरण
ल्याण्ड रोभर सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
माझ्ड सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
सुजुकी सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
मित्सुबिशी सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
पोर्श सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
वोल्वो सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
टाटा सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
प्रोटोन सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
Ssangyong सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
सिलिकॉन कार सहायक उपकरणहरू
सिलिकन कपडा थैला
व्यवसाय प्रकार:Distributor/Wholesaler , Manufacturer
मुख्य बजार: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe , Worldwide , Middle East
विवरण:अडीई कार कुञ्जी फोब कवर,कुञ्जी आवरण अडी,कुञ्जी फोब कवर अडी
सिलिकॉन कार सहायक उपकरणहरू >
सिलिकॉन एंटी सिलप चटाई
सिलिकॉन गिफ्टहरू >
सिलिकॉन सामान ट्याग
सिलिकॉन भान्सावेयर >
Home > उत्पादनहरू > अडी सिलिकॉन कुञ्जी आवरण > 20193 बटन अडियो कार कुञ्जी फोब आवरण
मोडेल संख्या: BE-175
प्याकेजिङ: प्रत्येक एकाइ एक उज्ज्वल थलमा
उत्पादकता: 3000pcs for one day
ब्रान्ड: सुन्दर पृथ्वी
उत्पतिस्थान: शेन्जेन गुआंग्डोंग
आपूर्ति क्षमता: 2000000 per weeek
प्रमाणपत्र: FAD SGS
एच एस कोड: 3926909090
शेन्जेन सुन्दर पृथ्वी प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड एक कम्पनी हो जो सजावट र प्रचारक उपहार मा विशेष र धेरै वर्षको अनुभव छ सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरणको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । अब, हामीसँग उन्नत, कुशल र सख्त प्रबंधन मोड, उत्कृष्ट निर्माण सुविधाहरू र पहिलो-कक्षाको तकनीकी शक्ति छ, जसले हामीलाई उच्च गुण सिलिकॉन कार कुञ्जी कास उत्पादन गर्न सक्षम गर्दछ । हामी विश्वास छ कि तपाईं अडी संग संतुष्ट हुनुहुनेछ पछ्याउने मोडलको रूपमा सिलिकॉन कार कुञ्जी प्रकरण , अडी3बटनहरू र बिना कार लोगोको साथ सिलिकॉन कुञ्जी शेल ।
प्रत्येक सिलिकॉन कार कुञ्जी धारक पछ्याउने सुविधाहरू छन्:
को सिलिकन रिमोट कार कवर पूर्ण आफ्नो you`re कार प्रमुख फिट छ। र अडी Ecosport कार की कुञ्जी पछ्याइएको कार कुञ्जी उपयुक्त छ, आशा छ कि तपाईं सही मोडेल छनौट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग मात्रा छ भने हाम्रो सिलिकॉन कुञ्जी आवरणको मूल्य फायदा छ ।
अडीको लागि कार कुञ्जी आवरण कुनै हानि छैन र पर्यावरण अनुकूल। जब तपाईं आफ्नो हातमा अडीको लागि सिलिकॉन कुञ्जी प्रोटेक्टर राख्नुहुन्छ , यसले नरम, चिकनी र हल्का महसुस गर्दछ। तपाई अडी सिलिकॉन कुञ्जी केसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जब तपाईंसँग छ।
हामी अनुकूलन सिलिकॉन कुञ्जी आवरणको कुनै पनि प्यान्टोन रङ बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाई चाहानुहुन्छ अडी सिलिकॉन कुञ्जी कास।
सिलिकन रिमोट कार केसले हानिकारक, पर्यावरण अनुकूल, गर्मी प्रतिरोध, टिकाऊ, निविड़ अंधकार, धूल-प्रविधिका विशेषताहरू छन्।
सिलिकॉन कार कुञ्जी आवरण बनावट मोडेलबाट टुक्रा टुक्रा गर्न उत्पादन गरिएको छ, हामी सबै प्रोफेसरहरू स्वयं काम गरेर प्रोफेसर गर्छौं।
1. 1. अत्याधुनिक थलोमा प्रत्येक सिलिकॉन अडी कार कुञ्जी थैली
2. 1000pcs सिलिकॉन अडी कार कुञ्जी थैला एक कार्टुनमा
3. कार्टून आकार: 58 * 26 * 38 सेमी
1. ग्राहकबाट सबै प्रश्न पेशेवर व्यक्ति द्वारा जवाफ दिइनेछ।
2. हामी डिजाइनर विभाग प्राप्त गर्छौं, कस्टम ग्राहकको आफ्नै डिजाइन गर्न सक्छ।
3. हामी वास्तविक कारखाना हो, तपाईले सबै उत्पादनको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ।
4. हामी उत्पादनका लागि धेरै उच्च प्रविधि उपकरणहरू पाउँछौँ।
5. उत्पादहरू जारी गर्नु अघि सबै कर्मचारीहरू राम्ररी प्रशिक्षित छन्।
6. हामी सबै उत्पादनको लागि उत्तम क्युसी विभाग पाउँछौ।
7 हामी 10 बर्ष भन्दा बढीका लागि यी उत्पादनहरूमा विशिष्ट छौँ।
8. सबै उत्पादनहरू चाँडै डेलिभर गर्न सकिन्छ।
9 सबै उत्पादनहरु CE, ROHS, PAHS र कुनै अन्य परीक्षण रिपोर्ट पठाउन सक्दछ।
उत्पादन कोटीहरू : अडी सिलिकॉन कुञ्जी आवरण
2017 AudiQ7 कुञ्जी फोब कवर सिलिकॉन materail अब सम्पर्क गर्नुहोस्
2017 अडी A4 कुञ्जी फोब कवर सिलिकॉन आवरण अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अडीए3को लागि सिलिकॉन कुञ्जी आवरण अब सम्पर्क गर्नुहोस्
Audi a6 सिलिकन कुञ्जी आवरण अब सम्पर्क गर्नुहोस्
2018 फैशनेबल रबर अडी कार की कुर्सी अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अडीको लागि नयाँ शैली कार कुञ्जी आवरण अब सम्पर्क गर्नुहोस्
नयाँ डिजाइन अडी सिलिकॉन स्वत: कुञ्जी अब सम्पर्क गर्नुहोस्
हट बिक्री अडी कार कुञ्जी खोल प्रतिस्थापन अब सम्पर्क गर्नुहोस्
VW को लागि नयाँ सिलिकॉन कुञ्जी प्रकरण
VW को लागि सिलिकॉन कुञ्जी कोर्ट कवर छाला
सिलिकॉन स्मार्ट कार कुञ्जी केस रिमोट प्रोटेक्ट आवरण
2018 Citroen3बटन कार सहायक उपकरण
2018 नयाँ डिजाइन फोर्ड मोनियोई कुञ्जी कास
Vw कुञ्जी सिलिकॉन आवरण3बटनहरू अनुकूलन गर्नुहोस्
2018 सिलिकॉन अन्वेषक कुञ्जी फोब सुरक्षात्मक मामला
चेभ्रोलेट3बटन कार कुञ्जी सिलिकॉन आवरणको लागि
सिलिकॉन Peugeot स्विफ्ट कार कुञ्जी FOB मामला कवर गर्दछ
Fiat FOB सिलिकन कार कुञ्जी खोल
KIA सिलिकॉन कार की कुञ्जी अनलाइन
VW 1 बटन फोब सिलिकन कार कुञ्जी खोल
फोर्ड सिलिकॉन कार कुञ्जी कवर अनलाइन किन्नुहोस्
शेवरलेट क्रूज को लागि रबर कुंजी प्रोसेसर
मर्सिडीज बेंज सिलिकॉन स्मार्ट कार कुञ्जी प्रोटेक्टर आवरण
बीएमडब्ल्यूका लागि कार सिलिकॉन कुञ्जी कास
अडीई कार कुञ्जी फोब कवर कुञ्जी आवरण अडी कुञ्जी फोब कवर अडी अडी कार कुञ्जी होल कवर 2018 अडी कार कुञ्जी फोब कवर सस्तो कार कुञ्जी फोब कवर बेंज कार कुञ्जी फोब कवर टिकाऊ कुञ्जी फोब कवर
प्रतिलिपि अधिकार © 2020 Shenzhen Beautiful Earth technology Co.,Ltd सबै अधिकार सुरक्षित।